iPhone 5c - iPhone News | Vaovao IPhone
El iPhone 5c Io no terminal aseho eo akaikin'ny iPhone 5s fa tsy mitovy amin'ilay farany, Apple dia nisafidy polycarbonate ho an'ny fonenan'ny terminal fa tsy aluminium. Ny fitaovan'ny iPhone 5c dia mitovy amin'ny an'ny iPhone 5, izany hoe chipset Apple A6, Fakantsary 8 megapixel ary Retina Display 4-inch. Na eo aza ny zava-misy fa ny vidin'ny iPhone 5c dia noheverina ho mora vidy kokoa, 100 euro latsaka noho ny maodely farany ambony ihany. Hita amin'ny loko isan-karazany.
Apple dia mametra ny fanohanana ny iPhone 5c satria heverina ho antinony
Ny iPhone 5c, natomboka teny an-tsena tamin'ny volana septambra 2013, no Apple niditra voalohany ...
Apple dia manolo modely 16Gb an'ny iPhone 5c amin'ny maodely 32Gb
ny Karim Hmeidan hace 3 taona .
Ny iPhone 5c, na eo aza ny fomban'ny maro, dia mpivarotra tsara indrindra ho an'i Apple. Tamin'ny fotoana nanombohany ...
Mijanona tsy mivarotra iPhone 5c sy 4s any India intsony i Apple
Ny ezaka rehetra nataon'i Apple dia mifantoka amin'i India, izay misy mponina mihoatra ny iray lavitrisa, ...
Meizu dia mandefa dika mitovy amin'ny iPhone 5c fa amin'ny Android
ny Nacho hace 6 taona .
Raha i Lenovo dia efa manana ny clone ny iPhone 6 amidy, Meizu dia manandrana azy izao miaraka amin'ny terminal izay ...
Ny iPhone 5c dia hajanona amin'ny 2015
Amin'ity fotoana ity dia tsy misy olona gaga raha milaza isika fa tsy nahomby ny iPhone 5c. Ny terminal finday miaraka amin'ny ...
Ny iPhone 5s sy iPhone 5c dia mihena ny vidiny
ny Nacho hace 7 taona .
Efa fantatsika ny vidin'ny iPhone 6 sy iPhone 6 Plus amin'ny maody maimaim-poana sy any Espana, tsy misy ...
T-Mobile manapaka ny vidin'ny iPhone 5s sy iPhone 5c
Ny mpandraharaha amerikana T-Mobile dia naka dingana vaovao mahaliana hisarika ny mpanjifa mety hifaninana. Ny orinasa…
Inona no hitranga amin'ny iPhone 5c?
ny Jose Azambuya hace 7 taona .
Niaiky i Tim Cook nandritra ny kaonferansa fidiram-bola taorian'ny nanombohan'ny iPhone 5c fa ny varotra amin'ity terminal ity ...
Ny iPhone 5Gb 8Gb dia 3Gb ihany no ambany noho ny 4Gb Galaxy S16
ny Luis Padilla hace 7 taona .
Na dia ora maro talohan'ny fanombohana ofisialy nataon'i Apple dia saika tafaporitsaka ny antsipiriany rehetra, ny fanombohana ny «vaovao» ...
Ny iPhone 5c dia mitondra ny fivarotana ny iPhone 5s
Moa ve ny paikady marketing ny plastika iPhone 5c dia niasa tsara ho an'i Apple, $ 100 fotsiny ...
Hanomboka hanamboatra ny efijery iPhone 5C ao amin'ny fivarotany i Apple manomboka amin'ny herinandro ambony
Hanomboka hisolo ny efijery simba an'ny iPhone 5C ao amin'ny Apple Store ny orinasa Apple manomboka ny alatsinainy ho avy izao ...